I-China ngokwezifiso ukukhangiswa kwe-eco-friendly canvas cotton tote bag ne logo ephrintiwe Umkhiqizi nomhlinzeki | Zhihongda
Isikhwama esikhwameni esikhanyayo esikhwameni se-eco-friendly esine-logo ephrintiwe
MACHINE WASHABLE & ECO-EBUNGANI MATERIAL WEKHODI. Zenziwe ngendwangu ewugqinsi nekhwalithi, engabamba kuze kufike kumakhilogremu angama-50 + wokudla bese ingena esikhundleni sezikhwama ezijwayelekile ezingama-2-3 zokudla. Ngokusebenzisa kabusha izikhwama zokudla ezingasetshenziswa kabusha umsebenzi osindayo nokugcina amapulasitiki engekho ezindaweni zokulahla udoti nasolwandle!
1. Umbala owenziwe ngokwezifiso, usayizi, uhlobo, njll, konke okufunwayo kungatholakala
2. MACHINE WASHABLE & ECO-Friendly MATERIAL WEKHODI. Zenziwe ngendwangu ewugqinsi nekhwalithi, engabamba kuze kufike kumakhilogremu angama-50 + wokudla bese ingena esikhundleni sezikhwama ezijwayelekile ezingama-2-3 zokudla. Ngokusebenzisa kabusha izikhwama zokudla ezingasetshenziswa kabusha umsebenzi osindayo nokugcina amapulasitiki engekho ezindaweni zokulahla udoti nasolwandle!
3. Ilungele amaphrojekthi nezipho! Ilungele i-DIY! Ilungele iphrojekthi yosuku lomama, amaphrojekthi we-DIY! Ukudizayina izipho zikaKhisimusi! Lezo zikhwama ze-canvas ziyasebenza ekubumbeni noma yiziphi izithombe ze-sublimation .---- konke kuhle impela futhi kuyindlela engcono kakhulu yokwenza i-DIY noma ubuciko ngokwamazinga wekhwalithi, ama-totes wesitolo sokuzilibazisa awalokothi abe mahle njengalokhu! Umsebenzi omuhle wephathi! Ungasebenzisa upende we-acrylic futhi izingane zaqhuma. Usayizi omuhle futhi omuhle wendwangu yokudweba.
4. Uzibuza ukuthi uzonikani ngomsebenzi wobuciko? Lezi zikhwama ezinombono wokuzihlobisa ngokwazo ngopende wobuciko. Ikhwalithi enhle, igezwe kahle, izolungela ukufekethiswa! Ilungele ukudweba! Isilinganisi esihle sokusebenzisa i-HTV kwizipho ezenziwe ngezifiso! Lezi zikhwama zingusayizi ofanele wamatote. Bangakwazi ukufaka izinto eziningi ngaphakathi kubo futhi benziwe kahle kakhulu. Ungasebenzisa upende we-acrylic namabhulashi okupenda, kumane nje kuzacile ngokwanele ukudweba ngaphezulu kwawo! Usayizi omuhle wokupenda kwendwangu kahle.
Isiqinisekiso SONYAKA WOKUQEDWA NGONYAKA WE-5.1: Sizobuyisela noma sibuyisele noma yiziphi izikhwama ezidabukile noma eziphukile kungakapheli unyaka owodwa zithengiwe. Yonga Imali kuma-oda wama-Multiple Piece ngamaPakethe ethu!
Igama lento Isikhwama esikhwameni esikhanyayo esikhwameni se-eco-friendly esine-logo ephrintiwe
Langaphambilini Natural eco blank blank cotton canvas tote mini bag blue canvas shopping bag with logo
Olandelayo: I-China umphakeli we-canvas tote bag ukuphrinta ulwandle isikhwama canvas tote isikhwama sikakotini
Custom Elanyatheliswa Eco-friendly Black Plain Ukotini ...
Ngezifiso Colorful Nobungane Eco Black Joint ...
Isitolo esidayisa yonke impahla ngokwezifiso black tote isikhwama ukuphrinta f ...